HomeTURKEYGobolka Marmara59 CorluSaxafi Mustafa Hoş Baadhitaan Musiibada tareenka Çorlu
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 59 Corlu, 59 Tekirdag, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY 0
wariye mustafa hosa oo baara musiibada wadada
Xeer-ilaaliye Galip Yılmaz Özkurşun, oo raadinayay kiis tareenka masiibada ah ee Çorlu, halkaas oo 25 uu naftiisa ku waayey, wuxuu soo gudbiyey dacwad magdhow ah oo ah '110 kun oo rodol' oo loogu talagalay suxufiga Mustafa Hoş oo si dhaw ula socday musiibada bilowgii.
Wariye Mustafa Hoş, oo ka falceliyay go’aanka magdhowga sida ku xusan warkii 16 Punto, wuxuu yiri: “Xeer ilaaliyaha mashiinka masiibooyinka Çorlu wuxuu i siiyay maxkamada. Si taxaddar leh u beegsada xukunka dembiga. 25 xeer ilaaliye oo aan ku dacweyn karin maamulka TCDD dayacaad ku kacaya nolosha bini aadamka ayaa doonaya 110 kun oo rodol ”.
Barnaamijka TV-ga Babıali ee qiimeynaya kiisaska magdhowga ee ka dhanka ah Pleasant, Xeer-ilaaliye Galip Yilmaz wuxuu sheegay inaysan jirin koonto shaqsiyadeed oo ka dhan ah Özkurşun'a.
Farxad, isagoo sheegaya inaysan sax ahayn in xeer ilaaliyaha guud uu raaco ku habboon dareenkiisa shaqsiyeed iyo dareenka shaqada, Hoş Saxafiga ma ahan / inuu si bayaan ah ula beegsado awoodda garsoorka ”.
Waan sii wadi doonaa inaan raaco ”
Isagoo hoosta ka xariiqay in kiiska ka dhanka ah uu yahay hanjabaad la xiriirta kiiskan Hoş, Hoş wuxuu sheegay in kiiska uusan cabsi gelin doonin uuna sii wadi doono inuu la socdo kiiska.
Ku saabsan kiiska
12 Bishii Sebtembar, dhageysiga ugu dambeeya ee kiiska 'tababbarka tareenka Çorlu waxaa la go'aamiyay inuu magacaabo khabiir cusub oo dhageysiga ku xigga dib loo dhigay illaa Diseembar.
110 kun oo ginni oo ku saabsan xeer ilaaliyaha ayaa furay dacwad magdhow Mustafa Hoş, guddiga khubarada Prof. Sida khabiirka kale ee Mustafa Karaşahin, Sıddık Binboğa Yarman wuxuu ku sugnaa wefdiga kuwaas oo nadiifiyay musiibada tareenka Pamukova halkaas oo 41 uu ku waayey noloshiisa Yarmanna uu xidhiidh ganacsi la lahaa TCDD sida Karaşahin. (T24)
Xaaladda Musiibada ee Tareenka Çorlu, Maanta 600 Hall Personality Hall 10 / 09 / 2019 Dhageysiga koowaad ee hoolka 'yar' sababta oo ah qoysaska iyo qareennada looma oggola maxkamadda ka dibna waxay ku dhawaaqday in maxkamadda ay ka laabatay kiiska Çorlu ee degmada Tekirdag, dadka 25 waa la diley, dadka 328 waa ku dhaawacmeen maxkamaddii ugu horreysay ee maxkamadda waxay u furtay maxkamadda sababo la xiriira qoyska iyo qareennada iyo qareennada garaacay by. Markii la bilaabay biloowgii maxkamadda, maxkamadda ayaa ka laabatay kiiska. Dhageysiga koowaad ee dib loo dhigay waxaa lagu qaban doonaa 10 Hall ee Xarunta Waxbarashada Dadweynaha Çorlu bisha Sebtember. Sida laga soo xigtay T600, Istanbul oo ka socota degmada Uzunköprü ee Edirne Halkalı362 Luulyo 6 wuxuu joogi doonaa yolcu ee Tekirdağ
Muuqaal naxdin leh oo ku saabsan Musiibada Musiibada Corlu 10 / 09 / 2019 Çorlu 25 328 waa dhageysiga labaad ee kiiska ka dhanka ah masiibada tareenka kaas oo 1 lagu dilay iyo 2001 dhaawacmay. Waxaa lagu arkay maxkamada 'Asluze Court' ee ku taal Çorlu. Ilaalada Wadooyinka Kurt waa xusuusta xariiqa. Way yaqaaniin halka ay aadaan. Markay dhibaato jirto, waxay durbadiiba uga digeen masuulka. XNUMX, caderadani waa laga tegay. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in saraakiisha nabadsugida ay leeyihiin go'aanka maxkamadda ee ah in dhibbanayaasha lagu soo daro eedeymaha kaliya ay gali karaan dhageysiga,…
Kiiska Tareenka ee Musiibada luorlu oo Dib Loo dhigay 10 Diseembar 12 / 09 / 2019 Degmada Çorlu ee Tekirdağ, 25 qof ayaa ku dhimatay halka 328 dad ahna ay ku dhaawacmeen tijaabada labaad ee shilka tareenka ee Xarunta Waxbarashada Dadweynaha Publicorlu ayaa sii socota. Sida lagu sheegay warbixinta Gökay Basca Birgun; "TCDD 1 Agaasime Goboleed dhageysiga la qabtay shalay oo maanta in la sii wado Halkalı Turgut Kurt wuxuu u shaqeeyey Maareeyaha Dayactirka Waddada Tareenka ee 14 Maareeyaha Dayactirka Waddada Tareenka. Çerkezköy Özkan Polat, Madaxa Dayactirka iyo Dayactirka Wadooyinka Madaxa Amniga Dayactirka Wadooyinka, Celaleddin Çabuk, oo ahaa sarkaalka dayactirka iyo dayactirka ee madaxa dayactirka wadada iyo Çetin Yıldırım, madaxa buundooyinka, ayaa difaacay. Go'aanka laga gaadhay maxkamada…
Pamukova qoysaska musiibo tareenka kaasoo laga badiyay iyadoo ay sabab u Mohammad 222 magdhow kun oo pounds 26 / 12 / 2013 Pamukova musiibo tareen iyadoo ay sabab u badiyay 222 magdhow kun oo pounds qoyska of Muhammad: Pamukova dhimasho Sakarya 41 ay sababeen masiibo dedejinta tareenka ee go'aanka garsoorka ahaa 9 sano ka dib. Muhammet Aydın, oo ah hooyadiis, aabihiis iyo walaalkiis oo ku dhintay shilal foosha xun, ayaa ku guuleystay dacwaddii uu u gudbiyay TCDD. Maxkamad ayaa go'aansatay in ay bixiso kunka kun oo xero oo loogu talagalay Mohammad, oo waayeel ah oo da'diisu ahayd 9. Maxkamadda ayaa go'aamisay in sannadkii hore 222 la xidhiidha shil tareen degdeg ah oo 9,5 lagu dilay Sakarya Pamukova. Shiicada hooyadiis ee shilka, Yavuz Aabe iyo walaalkiis, oo ku dhintay da'da 41 Muhammet Aydın ayaa ka luntay Mevlüt'i xaqiiqada. State Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkiga ...
Kiiska Magdhawga Magdhawga TCDD 103 Kun 15 / 08 / 2019 13 Diseembar 2018, tareen xawaare sare ku socda oo jidkiisa ku taga Ankara, Ankara, Ankara, Turkey. 9 qof ayaa ku dhintey oo dad 86 ah ayaa ku dhaawacmay shil tareen, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology iyo Cisbitaalka Cilmi baarista ayaa sheegaya in daaweyntu ay heshay Cetin, daaweyn socota oo ay sabab u tahay dhaawaca iyo waxyaabaha, TCDD'ye luminta akhlaaqda ayaa furtay dacwad magdhow. Codsi uu u gudbiyay maxkamadda, ayuu ku sheegay inaysan wax calaamad ah ka jirin saldhigga Mar stationandiz ee uu shilku ka dhacay.
BTS, Masuul ka ah shilalka tareenka!
Kiiska Magdhawga Magdhawga TCDD 103 Kun